FG: Cabbirka badda ee warbixintani ku saabsan tahay waa "Qalfoofka Qaaradda", taas ah cabbirka badda wixii ka shisheeya 200 mayl-badeed. Waana cabbirkaas fogaantiisa la gaarsiinayaa meel xeebta ka durugsan 350 nautical miles.
FG: Markaad aragtid EEZ (Aagga Dhaqaalaha) oo 200 nautical miles ah, waxa taasi ay Soomaaliya u tahay Territorial Waters oo ah 200 nautical miles, maadaama Soomaaliya ay dhaqan gelisay xeerka badaha ayadoo aan ka tanaasulin xeerka Law no. 37 ee Badda Soomaaliya
FG: Soomaaliya waxay xeerka badaha Saxiixday ayadoo aan ka tanaasulin Sharciga Soomaaliya ee Law No. 37 ee soo baxay 1972, taas oo badda Soomaaliya tahay 200-maylbadeed oo ah TS.
TS: Territorial sea (ka tirsan Dhulka Dalka qaar). CZ: Contiguous Zone (Aagga la olloga ah dalka).
FG. Sagaal (9) dal oo Soomaaliya ka mid tahay TS waxaa u ah 200 M sida ka muuqata khariidadda hoose
Waxaana jira dalal kale oo cabirka TS u dhexeeyo 12 ilaa 200 M
Sidoo kale maadaama Soomaaliya aysan ka jirin dawlad dhexe oo shaqayneysa xiligan, siday DFKMG ku andacoonayso, weli khad sugan (ama cabbir rasmi ah) looma samayn xadka badda ee ay la wadaagto dalalka deriska la ah: Jabuuti oo Galbeed kaga aadan, Yemen oo Waqooyi iyo Waqooyi Bari ka xigta iyo Kenya oo xigta dhanka Koonfureed. Ugu dambayntii marka ay Soomaaliya bilowdo in ay xadka badda kala xaajooto dalalka deriska la ah haday kusoo durkaan, waxaa jiri doono muran u dhaxaydoona Soomaaliya iyo labada dal oo ah Yemen iyo Kenya.
 UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea): December 10, 1982 kulankii lagu qabtay Jamaica ayaa Soomaaliya saxiixday heshiiskaa Qarammada Midoobey oo laga soo shaqaynayey 14 sano oo ay ka qayb galeen 150 dal. Waxaana lagu saxiixay Xeerka badaha Adduunka oo qodaabadiisa ay kamid yihiin
-- 12 nautical mile oo badda ah waxay ka mid tahay dhulka dalka xeebta leh (Territorial Sea). (Sida uu dhigayo Qodobka Article 3 ee xeerka UNCLOS 1982). Dalal ay Soomaaliya ka mid tahay waxaa Territorial Waters u ah 200nm, Soomaaliya waxay halkaas cuskatay Law No. 37 ee xeerka Soomaaliya oo soo baxay 1972.